Eminye imibala ye-iMac entsha iya kufumaneka kuphela kwi-Intanethi | Ndisuka mac
Usuku lokugqibela Epreli 20, I-Apple yonwabise abalandeli bayo nge-debut yombala omtsha weMac. Ngoyilo olumangalisayo, ngakumbi ngokubhekisele kubunzulu, eyona nto yayiqaqambe kakhulu yayikukudityaniswa kombala. Ulwazi olutsha lumkisa ukuba ezinye zazo zinokufumaneka kuphela ngokuzithenga kwi-Intanethi. Ezivenkileni sinokuthenga kwaye sincome ezinye zazo kodwa ayizizo zonke.
Emva kweminyaka engama-20 yobomi beMac, uApple wazisa ingxelo entsha. Ayisiyiyo kuphela ingaphakathi layo, kodwa nangokweyilo lwangaphandle. Ngoku sine-iMac ene-M1 ngaphakathi kunye nemibala emininzi. zininzi kangangokuba zinokutshatisa nawaphi na amatyala akhutshwe ngu-Apple kwi-iPhone 12 kunye nemibala ye-AirPods Max. Ukuba unomdla wokubona ithoni yale mibala ihlala, kuya kufuneka uyazi ukuba ayizukufunyanwa zonke kwiVenkile yeApple. Ezinye zezo iMacs ziya kuthengiswa kuphela kwi-Intanethi.
Ngokwengxelo epapashwe ngu-Apple, ziiMacs eziluhlaza, ezipinki, eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nesilivere kuphela eziya kufumaneka kwiindawo ezibonakalayo kwiVenkile yeApple. Ukufumana ukhetho lombala iorenji, tyheli nemfusa, Kuya kufuneka ubayalele ngewebhusayithi yabo. Inkampani ayichazanga ukuba kutheni le ndlela.
Sicinga ukuba kungenxa yobunzima obukhulu ekufumaneni loo mibala. Ngaphambi kokuba umsebenzisi anethemba lokuyithenga evenkileni kwaye axelelwe ukuba akukho nanye, kungcono uku-odola kwi-Intanethi kwaye ugcine. Leyo mibala ayi "qheleki "kakhulu, inesibindi kwaye ngekhe ubenze abaninzi ngombono wokuba abayi kuthengisa kwaye kufuneka bahlale nabo. Sicinga ukuba ukuba kunjalo, siya kuyazi kuxhomekeke kumaxesha okulinda yale mibala ikhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Eminye imibala ye-iMac entsha iya kufumaneka kuphela kwi-Intanethi